शेयर लिलामी के हाे ? कसरी आवेदन दिने ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyशेयर लिलामी के हाे ? कसरी आवेदन दिने ?
शेयर लिलामी के हाे ? कसरी आवेदन दिने ?
कम्पनीले निष्काशन गरेको हकप्रद विविध कारणले सबै बिक्री नहुँदा अवितरित हकप्रद शेयर वा अन्य शेयर पुनः बिक्रीका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुले बोलकबोल आह्वान गर्दछन् । बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्ने शेयरलाई लिलामी शेयर भनिन्छ ।
बोलकबोलका शेयरहरु प्राय छोटो समयका लागि मात्रै बिक्रीका लागि खुल्ला गरिन्छ । यस्तो शेयर खरीदका लागि बोकलबोल आह्वानपत्रमा उल्लेख भएको शर्त पूरा नभएको खण्डमा आवेदन खारेज पनि हुनसक्छ।
लिलामी शेयर खरिद गर्न बिक्री प्रबन्धक मार्फत ताेकिएकाे शुल्क तिरेर आवेदन फारम प्राप्त गर्न सकिन्छ। बोलकबोलमा भएको शर्त अनुसार एकै व्यक्तिले एक वा एकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाउने निर्धारण हुन्छ।
यसरी आफूले खरिद गर्न चाहेको शेयर संख्या र कति दरमा खरीद गर्न चाहेको हो स्पष्ट रुपमा खुलाएर तोकिएको आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु आवेदनसँग संलग्न गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले खरिद गर्न चाहेको शेयरको कुल रकम बिक्री प्रबन्धकले तोकेको बैंक खाता वा गुड फर पेमेन्ट चेक आवेदन फारमसँगै बुझाउन पनि सकिन्छ।
सम्बन्धित कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु, बिक्री प्रबन्धकले देशको ठूला शहरहरुमा तोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरु मार्फत अक्सन शेयरमा आवेदन गर्न सकिन्छ। यसरी आवेदन गर्दा आवेदन फारममा तोकिएको विवरण भरी खाममा लाहाछाप लगाएर बुझाउनुपर्छ।
Previous articleएनसिसि बैंकले २५ लाख कित्ता शेयर बेच्दै , कसरी किन्ने ?